Xamdi Rabbi iyo Mahadnaq
Waa mahadnaq loo soo jeediyey dadka Caawinay Carruurta Soomaaliyeed oo Daaweynta u baahan
Ugu horrayn waxaan illaahay ugu xamdiyayaa inuu suurtageliyey in la hellay lacagtii loo baahnaa in lagu bixiyo carruurtii Soomaaliyeed oo waddankaan Australia daawada loo keeni lahaa oo awal la la’aa.
Marka xigga waxaan uga mahadnaqayaa nin Soomaaliyeed, oo magaciisa in la shaaciyo diiday, oo ku deeqay lacagtii loo baahnaa si carruurtaas loogu soo qaado Australia halkaas oo wax lagaga qabanayo caafimaadkooda, ninkaas oo hadda ka horna ku deeqay lacag sidaas oo kale loogu baahnaa isagoo weliba diiday sheegista magaciisa. Waxaan illaahay shakhsigaas uga baryayaa inuu adduunkana sharaf iyo barwaaqo ku nooleeyo aakhirana jana fardowsa ka waraabiyo, akhristow aamiin dheh.
Waxaan kale oo mahad u celinayaa website-yada Soomaaliyeed qaarkood oo si Soomaalinimo ah iga aqbalay inay baahiyaan codsigayga ku waajahnaa in dadkaas loo hello lacag lagu soo qaado, la’aantoodna ayna suurtagsheen in laga warhello dhibta haysata carruurtaas Soomaaliyeed.
Wallaalkiin Ciise M. Dhollawaa